July 2021 - 7DAY THADIN
အရမ္းဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားတဲ့ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ထူးျခားျဖစ္ရပ္ေတြကို ေျပာျပလာတဲ့ ဒါယကာတစ္ဦး
July 31, 2021 July 31, 2021 - by admin
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မဟာမြိုင်က မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဆွမ်းခံကြွတော်မူခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမှ အခုလိုဆွမ်းခံ ထွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သပိတ်ပိုက်ပြီး ဆွမ်းခံထွက်လာတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ပြည်သူအများအပြားက လာရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူ့လောကကြီး သောကမီးဝိုင်း၊ကပ်ဘေးတွေဆိုက်နေချိန် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ အခုလို သပိတ်ပိုက်ပြီး ဆွမ်းခံ ထွက်လာတာကြေ ာင့် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး မကြာခင်ငြိမ်ဝပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ဒါယကာတစ်ဦးက ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ …
အရမ္းဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားတဲ့ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ထူးျခားျဖစ္ရပ္ေတြကို ေျပာျပလာတဲ့ ဒါယကာတစ္ဦး Read More
မိမိပိုင္ေနအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားလုံးကို လႉဒါန္းျခင္း
(ဦးကျော်မြ)+ဒေါ်ချို အုန်းတောရပ် မော်လမြိုင်မြို့မှ ရွှေမြင့်မိုရ်ဓမ္မနန္ဒီ ဆရာတော် အလိုရှိရာ အသုံးပြုစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် နေအိမ်တစ်လုံးနှင့် နေအိမ်အတွင်းပစ္စည်းများ၊ ငွေကျပ်သိန်း၃ရာ၊ ရွှေထည်ပစ္စည်း ၂၅ ကျပ်သားတို့ကို အပြီးအပိုင် လှူဒါန်းပါသည်။ အလှူရှင်၏ မွန်မြတ်သော အလှူကို ဝမ်းမြောက်အနုမောဒနာ သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေသော်။ လေးစားဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ခရက်ဒစ်. Zawgyi (ဦးေက်ာ္ျမ)+ေဒၚခ်ိဳ အုန္းေတာရပ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ေ႐ႊျမင့္မိုရ္ဓမၼနႏၵီ ဆရာေတာ္ အလိုရွိရာ …
မိမိပိုင္ေနအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားလုံးကို လႉဒါန္းျခင္း Read More
ေစ်းၾကီးေပးဝယ္ေသာက္ေနရတဲ့ ၾကက္ေပါင္းရည္ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္နည္း
July 25, 2021 July 25, 2021 - by admin
ဈေးကြီးပေးဝယ်သောက်နေရတဲ့ ကြက်ပေါင်းရည် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နည်း ကြက်ပေါင်းရည်(ဗမာကြက်)လူမမာ မီးနေသည် လူကြီး ကလေး အားဖြည့်စာကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်ရင်အောက်မှာနည်းလေးတွေရေးပေးထားပါတယ်… ရှိတဲ့အိုးနဲ့ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ပေါင်းပါသည်….ပေါင်းအိုးထဲရေတဝက်ထည့်ပါ….ပေါင်းအိုးပေါ်ဇကာတင်ပါတယ်… ဇကာပေါ်ကြွေပန်းကန်ကြီးထည့်ပါ….ဇကာနဲ့ပန်းကန်နဲ့အတိဖြစ်တာရှာထည့်ထားပါတယ်… ကြွေပန်းကန်ကြီးထဲကြွေပန်းကန်လုံးသေးမှောက်ထည့်ပါတယ်…. အရည်တွေပန်းကန်အောက်စုအောင်ပါ…. ဘေးပါတ်လည်အရေခွံအဆီခွာထားတဲ့ကြက်သားတုံးတွေစီ ကြက်သွန်ဖြူ ၃ ဥ ဂျင်းလေးနဲနဲထည့် အဖုံးအုပ် ၃ နာရီတည် ပြီးရင်ကြက်သားတုံးတွေကိုညှပ်နဲ့ယူပြီးဖယ်… အရည်ကိုဆီမပါအောင်စစ်ယူ….အားအင်ပြည့်ဖြိုးစွမ်းအားတိုး ကြက်ပေါင်းရည်ရပါပြီစင်….။ #ဒေါ်ဒေါ်အိ စားသောက်ကုန်မျာ မှုရင်းရေးသာဆရာကိုcrd ပေးပါတယ် Zawgyi ေဈးႀကီးေပးဝယ္ေသာက္ေနရတဲ့ ၾကက္ေပါင္းရည္ …
ေစ်းၾကီးေပးဝယ္ေသာက္ေနရတဲ့ ၾကက္ေပါင္းရည္ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္နည္း Read More
မေန႔က ကားနားလာၿပီး ကေလးငယ္ငယ္တစ္ေယာက္ “ငုံးဥျပဳတ္ဝယ္ပါဦး” လာေရာင္း လို႔ ဝယ္လိုက္မိေသာအခါ
မနေ့က ကားနားလာပြီး ကလေးငယ်ငယ်တစ်ယောက် “ငုံးဥပြုတ်ဝယ်ပါဦး” လာရောင်း လို့ ဝယ်လိုက်မိသောအခါ မနေ့က အမြန်လမ်းပေါ်အတက် အခွန်ကောက်တဲ့နေရာမှာ ကလေးငယ်ငယ်တစ်ယောက် ကားနားလာပြီး ငုံးဥပြုတ်ဝယ်ပါဦး လာရောင်းတယ်။ ကားတွေလည်းရှားတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဝယ်ပေးဖို့လုပ်တယ်။ ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ သုံးထုပ်ငါးရာတဲ့။ အမယ် ဘယ်ဆိုးလို့လဲ အရောင်းပါးနေပေမယ့် ဈေးမှန်ပဲရောင်းတယ်ဟလို့ စိတ်ထဲက ချီးကျူးမိတယ်။ သားတစ်ထောင်ဖိုးပေးဆိုတော့ သူ့ထဲကနေ ငါးရာဖိုးရောင်းပြီး နောက်မှာရပ်နေတဲ့ …
မေန႔က ကားနားလာၿပီး ကေလးငယ္ငယ္တစ္ေယာက္ “ငုံးဥျပဳတ္ဝယ္ပါဦး” လာေရာင္း လို႔ ဝယ္လိုက္မိေသာအခါ Read More
ကိုဗစ်နဲ့မတည့်သောသောအစားစာ ကိုဗစ်ဖြစ်နေလျှင် မျှစ်မစားကြပါနဲ့ (မတည့်ပါ)ဝက်သားလည်း ရှောင်ပေးပါ ငှက်ပျော်သီး၊ သြဇာသီး၊ ပိနွဲသီးမစားပါနဲ့ (မတည့်ပါ) အတတ်နိုင်ဆုံး ဆန်ပြုတ်ဝင်အောင်သောက်ပါ ကြက်စွတ်ပြုတ်( ဂျင်းများများ )နဲ့သောက်ပေးပါ မာလာရှမ်းကော စားပေးပါ ထမင်းပူ နှင့် အစုံသုတ် ချဉ်စပ်လေးစားပါ ငပိရည် ပူပူစပ်စပ် လေးနှင့် ကြက်ဉကြော်စားပါ တစ်နပ်ကို မိမိရရ စားပါ ကြက်ဉ အစိမ်းသောက်လို့ဝင်ရင်သောက်ပါ ရေမချိုးပါနဲ့ …
ကိုဗစ္နဲ႔မတည့္ေသာေသာအစားစာ Read More
” နေမကောင်းရင် ဒီယတြာ လုပ်ပေးပါ” အမြန်ဆုံးနေကောင်းသက်သာစေတဲ့ ယတြာဖြစ်ပါတယ်။ အ.သ.က်ကိုစောင့်သော ကလျာဏီ.နတ် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ၃၇ ခေါက်ကို မနက်တိုင်း ရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးပါ။ အသက်ကို စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက် သေဘေးကြုံရင် ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ အညွှန့်တွေ ရှာရခက်တယ် မလွယ်ဘူးဆိုရင် တော့ လွယ်တဲ့ ယတြာလုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခေါင်းရင်း၊ ခါးလယ်၊ ခြေရင်းမှာ ဆန်နို့်ဆီဗူးတစ်ဗူးစီ ထားပြီး …
ေန.မေကာင္းရင္ ဒီယၾတာလုပ္ေပးပါ Read More
ဇရပ္ပ်က္ထဲမွာ သားအရင္းနဲ႔ေခြၽးမတို႔ေပါင္းၿပီး အသက္ႀကီးေနတဲ့ မိခင္အိုႀကီးကို လာေရာက္စြန႔္ပစ္
သားအရင်းနဲ့ချွေးမတို့ပေါင်းပြီး အသက်ကြီးနေတဲ့မိခင်အိုကြီးကို ဇရပ်ထဲမှာ လာရောက်စွန့်ပစ်ထားရစ်ခဲ့။ မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေဒီပုံထဲက အဘွားကို သေချာကြည့်ပေးကြပါ။ နာမည်ဒေါ်ယဉ်လှိုင် အသက် 80 သားနာမည်ကိုဝင်းနိုင် ချွေးမနာမည်မမိုမို နေရပ်လိပ်စာ မော်လမြိုင်၊ ကျွန်းတောလမ်း သူ့သားကကားမောင်းတယ် မြေးလေးတွေလဲရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဒါတွေကဒီအဘွားကို မေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက်လဲကြီးနားကလဲ မကြားတော့ မနည်းအော်ဟစ်ပြီး မေးထားရပါတယ်။ ဒီနေ့ညနေ 4:00 ဝန်းကျင်လောက်က ကျွန်တော်တို့ ပဲခူးတိုင်း၊ …
ဇရပ္ပ်က္ထဲမွာ သားအရင္းနဲ႔ေခြၽးမတို႔ေပါင္းၿပီး အသက္ႀကီးေနတဲ့ မိခင္အိုႀကီးကို လာေရာက္စြန႔္ပစ္ Read More
တရားပြဲက်င္းပၿပီး ရရွိတဲ့အလႉေငြမ်ားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ သၿဂႋဳလ္စက္မွာပဲ ျပန္ၿပီ မီးသၿဂႋဳလ္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်လန္းကြၽန္းဆရာေတာ္ (ရုပ္သံ)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ ဆလုံတိုင်းရင်းသားများအား ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်လာအောင် သာသနာပြု ဂျလန်းကျွန်းဆရာတော်လို့ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ အရှင်ကုသလဇောတိကဟာ ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်နေ့က ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့် မွေးဖွားရာဇာတိဖြစ်တဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာစည်မြို့နယ်ကဆေရုံးမှာပဲ ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မှုသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျလန်းကျွန်းဆရာတော်ဟာ ဇူလိုင်(၅)ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်ပြီး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့မှာပဲ ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်မှုချိန်မှာတော့ သက်တော် (၄၅) နှစ် ၊ …
တရားပြဲက်င္းပၿပီး ရရွိတဲ့အလႉေငြမ်ားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ သၿဂႋဳလ္စက္မွာပဲ ျပန္ၿပီ မီးသၿဂႋဳလ္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်လန္းကြၽန္းဆရာေတာ္ (ရုပ္သံ) Read More
ေခြးအူျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္မည့္ က.ပ္ေ.ရာ.ဂါဆိုးႀကီးရဲ႕ အ.တိ.တ္န.မိတ္မ်ား
ဆက်စပ်အသိပေးတိုက်တွန်းခြင်း ကပ်ရောဂါနဲ့ ခွေးအူခြင်း နိမိတ် ယခုတလော ညတိုင်းနီးပါး ခွေးတွေ အူနေကြတဲ့ အကြောင်း နိမိတ်ကောက်အဟောအ-မင်္ဂလာမို့ မရေးခဲ့တာပါ။ မိတ်ဆွေ လေးငါးဦးထံတော့ ဖုံးဆက် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါသေး၏။ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁ ခွဲ ၂ လောက် ၊ ခွေးတွေ တော်တော်အူပါသည်။ လမ်းမကြီးပေါ်တွေက အူတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ခွေးအူသံ ရှည်/ကြာ/စွဲ၍ …
ေခြးအူျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္မည့္ က.ပ္ေ.ရာ.ဂါဆိုးႀကီးရဲ႕ အ.တိ.တ္န.မိတ္မ်ား Read More
က.ပ္ဆို.က္ေနခ်ိန္မွာ သိဒၶိေအာင္ ေရဆန္ကြၽန္းနက္ ျမတ္စြာဘုရားႀကီးကို ဖူးျဖစ္ေအာင္ဖူးၾကပါ
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းမှ ဆယ်ယူရရှိသောခ န့်မှန်း သက်တမ်းနှစ် ၈၀၀ ခန့်ရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအား ထုလုပ်ပူဇော်ထားသည့် သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက်မြတ်စွာဘုရားကြီ း.. က.ပ်.ဆိုက်နေချိန်မှာ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီးကို ဖူးဖြစ်အောင်ဖူးကြပါ သိဒ္ဓိအောင် ရေဆန်ကျွန်းနက် မြတ်စွာဘုရားကြီး သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း (၈၀)ကျော် ရှိပါပြီ။ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းရှိ ရေဆန်ကျွန်းနက်တုံးကြီးအားဆယ်ယူ၍ ဆင်းတုတော်ကြီးထုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားသောနေရာသည်အင်မတန် အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ပြီး တရားရှုမှတ်သူများ လာရောက်၍ …
က.ပ္ဆို.က္ေနခ်ိန္မွာ သိဒၶိေအာင္ ေရဆန္ကြၽန္းနက္ ျမတ္စြာဘုရားႀကီးကို ဖူးျဖစ္ေအာင္ဖူးၾကပါ Read More